အရေပြားထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - Practice Skin Factory
Body Art Art Blank Back နောက်တက်တူးထိုးလေ့ကျင့်ခန်းအရေအတွက် soft silicone အကြီးစားလေ့ကျင့်ရေးအရေပြား
ပျော့ပျောင်း။ အရောင်ရလွယ်ကူသောအစစ်မှန်သော silicone၊ အထူ ၀.၃ စင်တီမီတာ၊ ဖော်ပြချက်: ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော texture၊ သားရေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လူ့အသားအရေ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုတုပ။ ၎င်းသည်လူ့အသားအရေ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သောအထူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အသားအရေနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသည်။ အစစ်အမှန်စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီက၎င်းသည်သင်တန်းသားများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ (အချို့ကျောင်းသားများကအရေပြားကိုအညစ်အကြေးနှင့်ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည်ဟုဆိုကြသည်။
၃၉.၅ * ၃၀ * 0.3 စင်တီမီတာ A3 အရွယ်အစားရော်ဘာအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အသားအရေအတွက်အသားအရေနူးညံ့သော elastic silicone ဆေးမင်ကြောင်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်း
1. အရေအတွက် - 1pcs 2. food-silicone ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ 3. လူ၏အသားအရေနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး dual-side အသုံးပြုမှုအတွက်လုံလောက်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - သားရေ - ပျော့ပျောင်းသောပျော့ပျောင်းသောအရွယ်အစား - ၃၉၅ * ၃၀၀ * ၃ မီလီမီတာပါ ၀ င်မှု - ၁ x တက်တူးလေ့ကျင့်မှုအရေခွံဖော်ပြချက်မင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်စက္ကူအလွှာနှင့်ချုံ့ထားသောဆေးထိုးအပ်မှင်နှင့်စက္ကူမျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့်မှင်များကိုဖယ်ရှားရန်။ အဓိကအချက်ကဘာလဲ...
20cm * 30cm အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အတွက် Microblading Tattoo အတွက်အလွတ်သားရေအလေ့အကျင့်
အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အတွက် Blank Practice Skill Microblading Tattoo Tool Accessory Synthetic Skin Feature: 1. တက်တူးထိုးခြင်းသည်အရေပြားကိုအညစ်အကြေးနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ 2. Freestyle တက်တူးထိုးလေ့ကျင့်မှုအတွက် Plain သည်အရည်အသွေးမြင့်တက်တူးထိုးခြင်းကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုကူညီသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ပါ။ အညွှန်းမှအရိပ်သို့သွားသည်။ ၄။ အလွန်ပျော့ပျောင်းသော၊ အရောင်ကဲ့သို့သောအသားအရေ၊ ချည်ထည်သည်လူ့အရေပြားနှင့်အလွန်နီးကပ်ပြီးလူ၏အရေပြားနှင့်ဆင်တူသည်။ 5. ခြေလက်များသို့မဟုတ်ခြေထောက်များကိုပတ်ပတ်။ ရင်ဘတ်သို့မဟုတ်ကျောတွင်နေရာချရန်အတွက်အသင့်ဖြစ်သည်။
3D ဦး ခေါင်းမျက်နှာအသားအရေ 3D Microblading အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်မျက်ခုံးနှုတ်ခမ်းတက်တူးထိုးလေ့ကျင့်ခန်းလူ့ mannequin ခေါင်းမျက်နှာအသားအရေ
3D Mannequin Head Face အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အလေ့အကျင့်တွင်အရေပြားပါဝင်သည်။ (2Pcs မျက်လုံးများ၊ 1Pcs နှုတ်ခမ်း၊ ဦး ခေါင်းမော်ဒယ်တစ်လုံး) * 1 စုံအသစ်စတင်သူများအတွက်အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်ကိုလေ့လာရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၁။ အသားအရေနှင့်သက်ဆိုင်သောအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း ၂။ မကြာခဏအသုံးပြုရန်အလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်သောမျက်လုံးများနှင့်ပါးစပ်များကို ၃။ မျက်လုံးတပ်ဆင်ခြင်း၏ရင်ပြင်အကျယ်သည်မျက်ခုံးပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ ၄။ သီးခြားရောင်းချသောထပ်ဆောင်းထည့်မှုများဤပစ္စည်းသည်အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်သင်တန်းသားများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစပြုသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သငျသညျမျက်စိနှင့် MOU ပြောင်းလဲနိုင်သည် ...
ဖန်တီးထားသောအရေပြားကဲ့သို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တက်တူးထိုးသည့်သင်တန်းသားအတွက်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဤအရေပြားအတု၏နောက်ကျောကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အရေပြားအတုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကွက်လပ်ရှိသည်။ အရွယ်အစား: ခန့်မှန်းခြေ။ 20x15cm အလေးချိန် - ၅၀ ဂသင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုစည်းရုံးပါ - မှင်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသည်တက်တူးထိုးခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ကိုင်ရမည်ကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးတက်တူးထိုးနေစဉ်အတွင်းမှင်မဖိတ်ခြင်းနှင့်ပြန့်ပွားခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊
စင်ကြယ်သောအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်သင်တန်းအသားအရေ 290 * 195 * 3MM Beginner ထူထဲသော silicone tattoo Practice Skin
၁။ အစပြုသူများကိုတက်တူးထိုးခြင်းအဆင့်ကိုလျင်မြန်စွာမြှင့်တင်ပါ။ ၂။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောပစ္စည်းများမပါဝင်ဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသောအရာ ၀ တ္ထုပစ္စည်း ၃။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ စစ်မှန်သောခံစားမှု ၄။ အစပြုသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောအနုပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (၅) တက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ နာမည် - လက်တွေ့ကျသောပစ္စည်းပစ္စည်း - silicone ကားပါကင်အရွယ်အစား - ၂၉၀ * ၁၉၅ * ၃ မီလီမီတာစုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၀.၂၂ ကီလိုဂရမ်အကောင်းဆုံး Tattoo Practice Skin လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှသာအရေခွံကိုလေ့ကျင့်ရန်တက်တူးထိုးနည်းပညာရှင်များသည်ရွေးချယ်မှုအလွန်နည်းပါးခဲ့သည်။ အများစုကိုရာဘာသို့မဟုတ်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပျော့ပျောင်းသော Elastic Silicone Tattoo Practice Skin နှင့် ပတ်သတ်၍ လက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ
၁။ ပစ္စည်း: သားရေနူးညံ့သည့်သားရေ 2. အရွယ်အစားအမျိုးအစား ၁: ၂၀ * ၂၀ * ၃ စင်တီမီတာအမျိုးအစား ၂း၁၅ * ၁၅ * ၃ စင်တီမီတာပါ ၀ င်သည် - ၁ x တက်တူးထိုးလေ့ကျင့်သည့်အရေခွံနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတက်တူးထိုးခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအရေပြားအကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက်တူးထိုးပညာရှင်ပင်အမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူနေသည် နည်းစနစ်အသစ်များနှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးစားခြင်း တက်တူးထိုးလေ့ကျင့်ခန်းသည်အသားအရေကိုနူးညံ့သောညှိခြင်းစွမ်းရည်နှင့်ဖောက်သည်များကိုပြသနိုင်သည့်အရာများဖန်တီးရန်အတွက်အဆုံးစွန်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ ယနေ့ဒီဇိုင်းများတွင်ရှုပ်ထွေးသောမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အရိပ်များပါဝင်သည်
20 * 30 * 0.13cm တက်တူးထိုးမျက်ခုံးလေ့ကျင့်ခန်းအသားအရေအရည်အသွေးမြင့်မားသောအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်မျက်ခုံးတက်တူးထိုးခြင်းအသားအရေ Microblading supply skin
Tattoo Practice Skin အရည်အသွေးမြင့်လေ့ကျင့်ထားသောအသားအရေ *** အထုပ် - ၁pcs *** ရိုးရိုးဒီဇိုင်းနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်ရိုးရိုးမျက်နှာပြင်၊ မတူညီသောနည်းစနစ်များကိုလေ့ကျင့်ပါ။ အကြမ်းဖျင်းမှအရိပ်များသို့ ၀ င်သည်။ *** ဖန်တီးထားသောအသားအရေနှင့်တူသည့်ပစ္စည်းမှပြုလုပ်သည်။ လက်တွေ့ကျသောအသားအရေကိုမလေ့ကျင့်ဘဲကျွမ်းကျင်မှုများ၊ လူ့အသားအရေနှင့်တူညီသည့်ခံစားမှုရှိခြင်း၊ နှစ်ဖက်စလုံးအသုံးပြုမှုအတွက်လုံလောက်သောအရာ။ Tattoo Practice အရွယ်အစား - 200 * 300 * 1.3mm အလေးချိန် - 0.1 ကီလိုဂရမ်ထုပ်ပိုးခြင်း - 1pc / opp အိတ် Tattoo Practice Skin ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနည်း အစဉ်လိုက် ...
20 * 15 * 0.13cm တက်တူးထိုးမျက်ခုံးအသားအရေအရည်အသွေးမြင့်မားသောအမြဲတမ်းမိတ်ကပ်မျက်ခုံးတက်တူးထိုးလေ့ကျင့်ခန်းတက်တူး Microblading supply skin
Tattoo Practice Skin အရည်အသွေးမြင့်အသားအရေကိုလေ့ကျင့်ပေးသောအသားအရေ။ ၁။ အစပြုသူများကိုတက်တူးထိုးခြင်းအဆင့်ကိုလျင်မြန်စွာမြှင့်တင်ပေးပါ။ (၅) တက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁။ ပစ္စည်း - သားရေပျော့ပျောင်းသောသားရေ 2. အရွယ်အစား - 200 * 150 * 1.3MM 3. အသားတင်အလေးချိန် - 80 ဂရမ် / PCS ပါဝင်သည့်အထုပ် - 1x Tattoo အလေ့အကျင့်အရေပြား Tattoo အလေ့အကျင့်အရေပြား - အကြံပြုချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ...